Umhambisi wamanzi School Isikolo • IYunivesithi • Kindergarten • Warsaw
Ngaba ufuna isicoci samanzi esikolweni, i-kindergarten okanye eyunivesithi? Inkampani yaseWater Point ibonelela izihluzi zamanzi ezingenabhotile, baseliUmthombo weenkokeli zehlabathi kwiibhanki, apho sisisithethi esikhethekileyo ePoland.
Mva nje, umgangatho amanzi Ukunikezelwa kwamanzi ePoland kuya kuba ngcono. Umthetho wasePoland kunye nemigaqo ye-EU ifuna ukugcinwa kwemigangatho ephezulu yokuselwa kwamanzi. Kwimeko yokuthandabuza, kunokwenzeka uku-oda uvavanyo lomgangatho wamanzi aphuma kwimpompo yethu kwisikhululo sezindlu zococeko esikufuphi kunye nesifo.
Abantu abaninzi ngakumbi babonisa ulwazi malunga ne-pro-health, oku kuthetha ukuba sikhathalele ngakumbi into esiyiselayo. Izityalo zokunyanga amanzi zifakwe kwizindlu ezininzi, okanye amacebo okucoca ohambisa amanzi.
Ukususela nge-1 kaSeptemba ngo-2015, zonke izikolo ziyakwalela ukuthengiswa kokutya okungenampilo, kubandakanya neziselo ezineswekile. Nangona kunjalo, izikolo zinesibophelelo sokubonelela abafundi ngamanzi okusela, esona siselo sisempilweni ebantwini.
Yiyo loo nto kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba, ayisekho ekhaya kuphela, kodwa nangaphandle kwawo, abantwana kunye nolutsha banokufikelela ngokulula kumgangatho ofanelekileyo wamanzi: esempilweni, ecocekileyo kwaye emnandi.
Kukholelwa ukuba abantwana abasaqalayo, abafundi besikolo kunye nabafundi baseyunivesithi kufuneka bafumane ukufikelela rhoqo kumanzi okusela kwindawo yokufunda, apho bachitha iiyure ezininzi ngexesha lasemini. Ngokufanelekileyo, la manzi kufuneka akhululeke kwaye afumaneke ngokulula. Iinkampani ezivelisa abahambisa amanzi okusela beza nazo ngokuchasene nale minqweno. Ezo zixhobo zinokubekwa kwindawo efanelekileyo kwisikolo ngasinye. Abantwana kunye nolutsha banokuzisebenzisa xa kuvela isidingo, oko kukuthi, ngexesha lekhefu eklasini okanye emva kwesifundo semfundo yomzimba. Ukufikelela rhoqo kunye nokungenamkhawulo kumanzi acocekileyo, acocekileyo kwaye amnandi aya kuhambisa ukuhanjiswa ngokufanelekileyo komzimba, kwaye kuya kukuvumela ukuba ufunde iindlela ezilungileyo zokutya.
Iziselo zokusela amanzi, imithombo kunye nazo zonke iintlobo zeziselo, ezinokubekwa kumaziko emfundo kweyona ndawo ifanelekileyo, nceda ukubonelela abafundi ngamanzi amahle kwaye amnandi.
Indawo yokuhambisa amanzi okusela kufuneka ibekwe kwindawo enokufikeleleka ngokulula: kwigumbi lokufundela, kwigumbi lokuphumla, kwigumbi lokugcina izilwanyana okanye kwigumbi elinegumbi lokuhlala ecaleni kwendawo yokuzivocavoca, eya kuthi iqinisekise ukufikelela ngokulula kumgangatho ophezulu wamanzi. Izixhobo ezilungiselelwe izikolo zinezikhuselo ezikhethekileyo zokuthintela ukusasazeka kwamanzi ngabantwana.
Ngokuthathela ingqalelo ukuba owona mthombo uphambili wolwelo kumntwana kufanelekile ukuba ube ngumgangatho olungileyo wamanzi, amanzi okusela ahambisa le nto.
I-dispenser yanamhlanje iqinisekisa ukuba amanzi acocekileyo afumaneka ngokulula, ngelixa kuncitshiswa iindleko zokubonelela ukufikelela kumanzi okusela abafundi. Inzuzo eyongezelelweyo kukhathalelo lwendalo.
Amanzi avela kwi-dispenser esekwe kwi-kindergarten, isikolo okanye eyunivesithi ine-flavour ekhethekileyo kunye nomgangatho kwaye ikuvumela ukuba ukhokele indlela yokuphila enempilo kunye nokubumba umkhwa wokusela amanzi kunye nokutya okunempilo phakathi kwabantu abancinci.
Kuba abantwana kufuneka basele malunga neelitha ezimbini zamanzi ngosuku, esona sisombululo sisiso kukufaka izixhobo zokuhambisa amanzi kwiziko ngalinye lemfundo, kwiindawo ezahlukeneyo, ukuze amanzi afumaneke ngokulula kubo bonke abafundi.
amanzi asimahla esikolweniamanzi asimahla esikolweniukufikelela kwamanzi esikolweniinto yokuhambisa amanzi abantwanainto yokuhambisa amanzi esikoloimfundoImithombo ye-spa esikolwenieziselayo ezikolweniokusela amanzi ezikoloamanzi abantwana ezikolweniamanzi eyunivesithiamanzi esikoloukuya kumpompo emanziniizithuba zamanzi ezikolweniintwasahlobo yamanzi esikolo